[Fitaovana] Fiteny Indizeny: Zero to Digital – Taridalana mitondra ny fiteninao ho antserasera · Global Voices teny Malagasy
[Fitaovana] Fiteny Indizeny: Zero to Digital – Taridalana mitondra ny fiteninao ho antserasera
Voadika ny 30 Novambra 2019 8:07 GMT
Vakio amin'ny teny नेपाली, українська, English
Fonomboky [Fitaovana] Fiteny indizeny: Zero to Digital – Taridalana mitondra ny teninao ho antserasera. Nampiasaina amin'ny lisansa CC BY 4.0.
Tamin'ny volana Desambra 2019, namoaka fitaovana vaovao “Fiteny Indizeny: Zero to Digital: Taridalana mitondra ny teninao ho antserasera” ny Translation Commons mba hamaritra ny dingana hahatonga ny fiteny ho hita ao amin'ny solosaina sy ny fitaovana finday.
Araka ny fampidirana ao amin'ny taridalana, natao ho an'ireo fikambanana mpanohana, ny fiarahamonina indizeny sy ireo teknolojista ny taridalana ary manome dingana tsikelikely mba hanampy ireo vondrom-piarahamonin'ny teny te “hifandray antserasera, hizara fahalalana sy fanadihadiana, ary hampiasa rindrambaiko sy fitaovana izay tsy tonga any amin'izy ireo.”
Ahitana fizarana roa voalohany ny taridalana, izay samy ahitana tabilao manampy amin'ny fanombanana ny toetry ny fiteny ankehitriny ary hanampy ireo mpamaky hanomboka hampihatra ireo teknolojia misy ho an'ny fitenin'izy ireo.
Ahitana rakibolana misy ireo voambolana sy tondro hanaovana Unicode, fametrahana endri-tsoratra ho kaody, kaodim-piteny ary endri-tsoratra.ihany koa ny taridalana.
Azo jerena amin'ny lisansa Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ny taridalana manontolo ary azo trohana ao amin'ny tranonkalan'ny Translation Commons.
Lahatsoratra notsongain-ny Rising Voices, tetikasa iray miaraka amin-ny Global Voices manampy amin-ny fanapariahana vaovaon-ny tsy mbola mahatakatra aterineto loatra ity. · Lahatsoratra rehetra
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany
13 ora izayAngletera
Miantso ny Praiministra Aostraliana ny Printsy Charles mba hanatrika ny fihaonambe manerantany momba ny fiovaovan'ny Toetrandro ao Glasgow
2 andro izayAzia Afovoany sy Kaokazy
Mety tsara ho an'ny mozika rap ny fiteny Kazakh: Antsafa nifanaovana tamin'ilay mpaneho hevitra ara-kolontsaina Yevgeniya Plakhina
1 herinandro izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Mangataka fanafahana ilay mpikatroka Alaa Abd El Fattah ny mpanohana
16 Janoary 2019Karaiba
Ireo Feonkira Folo Tsara Indrindra Rehefa Krismasy Ao Trinidad & Tobago